ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဉီးအောင်မင်း ဒိန်းမတ်ပါလီမန်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Henrik Thorup Gamst ဉီးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဉီးအောင်မင်း ဒိန်းမတ်ပါလီမန်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Henrik Thorup Gamst ဉီးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဉီးအောင်မင်း သည် ဒိန်းမတ်ပါလီမန်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Henrik Thorup Gamst ဉီးဆောင်သောအဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ ၃ နာရီခွဲ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင်၊ အဆောင်အမှတ် (I-1) ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော်များရှိ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အရေးပါမှု အခန်းကဏ္ဍများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်